I-Caf ibonkala ibambe iSafa ngobhongwane | News24
I-Caf ibonkala ibambe iSafa ngobhongwane
ISITHOMBE: SITHUNYELWE UTokyo obonakala ebhekene nomqansa emkhankasweni wakhe wokuthi akhethwe njengomongameli weFifa njengoba ehlulekile ukuthola ukusekwa yi-Caf.
INHLANGANO ephethe ibhola kuleli laseMzansi iSouth African Football Association (Safa) isizithola isesimweni esibucayi kabi noma ayisazi ukuthi kufanele yenzeni.
Kulezi nsuku izikhulu zeSafa zizibuza ziyaziphendula kanti nokudideka sekubonakala kukhona manje ngoba abaphathi bazithola kufanele bancelise amawele noma-ke bangathathwa njengeziphoxi noma abadayisi abahluleka ukuxhasa indoda evela ezweni labo.
Into exaka noma eyenza uSafa angabuthi qothu ubuthongo ukuthi inhlangano ephethe ibhola e-Africa yonkana iCaf isikubeke kwacaca ukuthi yona angeke imxhase noma imvotele loyo waseNingizuma Africa uTokyo Sexwale njengoba engenele osokuba uMongameli weFifa.
Imibiko nezinsolo eziqhamuka emahovisini eSafa aseFNB Stadium akhomba ukuthi iningi lezikhulu zixakwa wukuthi uSexwale ulokhu eqhubeka nokukhankasela ukuba wuMongameli weFifa kodwa ebe ebona ukuthi akekho ndawo.
Izimpukane eziluhlaza zithi sekufanele naye azobonele losomabhizinisi ukuthi akukho ndawo lapho ethembele khona uma sekucacise abakuCaf.
“Iqiniso lithi iCaf ingabaphathi bebhola e-Africa yonke futhi banamandla amakhulu kwiFifa. Uma-ke labo abaphethe kwiCaf ne-Africa yonkana ithi angeke ikuvotele kuchaza ukuthi awekho amathuba okwenza kahle okhethweni,” kusho omunye wabamnumzane ozazi kahle izindaba zakwiSafa kodwa ongafuni livele igama lakhe.
Okunye okufike kwathusa uSafa kule zinsuku isitatemende esikhishwe uNqonqoshe wezeMidlalo uFikile Mbalula. USafa ubusizimisele ukuba nomhlangano ophuthumayo ukuze ucacise ngendawo ozoyithatha ngendaba kaSexwale kodwa bathuswa uMbalula othe yena lo somabhizinisi nowake waba usopolitiki ongaconsi phansi (Sexwale) kufanele axhaswe ngayoyonke indlela yiSafa kanye nezwe lonke laseMzansi.
Okuxaka iSafa ukuthi kufanele ingabukeki iyimbi noma inephutha phambi kukaMbalula kanti nobudlelwane neCaf kufanele buhlale bubuhle.
Okwamanje iSafa imi kahle kwiCaf noma iyathandwa. Lokhu kubonakala ngezikhulu ezivela eMzansi noma kwiSafa emakomitini amaningi e-Caf.
Lokhu kwenza abaphathi beSafa baphoqeke ukuxhasa noma ukuvotela othandwe wakhethwa yiCaf uSheikh Salman Bin Ibrahim al-Khalifa waseBahrain.
Kumanje nje uMongameli weSafa uDanny Jordaan ungumaluleki ka-Issa Hayatou onguMongameli weCaf.
Kanti ezinye izikhulu zeSafa zisemakomitini ahlukene eCaf.
“UMnu Sexwale uyaqhubeka nokuthola uxhaso emnyangweni yezemidlalo nakuNqonqoshe wezeMidlalo, ”kusho isitatimende.
Izindaba ezikhulunyelwa ngaphansi kwamatafula eSafa House kule zinsuku ukuthi ithimba likaSafa angeke likwazi ukuphikisana noCaf uma sekuvotwa.